JW Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Mach 2016
Ajụjụ: Ì chetara ihe a e kwuru n’amaokwu Baịbụl a anyị ga-agụ?
Amaokwu Baịbụl: Jọn 3:16
Otú a ga-esi enye ya: Ụlọ Nche a kọwara otú ahụhụ Jizọs tara na ọnwụ ọ nwụrụ ga-esi baara gị uru.
Ajụjụ: Legodị ajụjụ a dị ebe a na azịza ndị ha na ya so. [Gụpụta ajụjụ nke mbụ na azịza ndị dị n’okpuru ya.] Olee nke i chere bụ azịza ya?
Amaokwu Baịbụl: Mat. 4:1-4
Otú a ga-esi enye ya: Ebe ọ bụ na Ekwensu gwara Jizọs okwu mgbe ọ na-anwa ya, Ekwensu agaghị abụ ihe ọjọọ dị mmadụ n’obi. Olee ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru gbasara Ekwensu? Isiokwu a ga-akọwakwuru gị ha.
Otú a ga-esi enye ya: Anyị bịara ịgwa unu gbasara ihe dị mkpa anyị ga-eme n’abalị iri abụọ na atọ n’ọnwa Mach. [Nye onye ahụ otu akwụkwọ ịkpọ òkù.] N’ụbọchị ahụ, nde kwuru nde ndị mmadụ ga-agbakọ n’ebe dị iche iche icheta ọnwụ Jizọs Kraịst. A ga-eji Baịbụl kọwaara anyị uru ọnwụ Jizọs nwụrụ baara anyị. E dere ebe anyị ga-anọ eme ya na oge anyị ga-eme ya ná mpempe akwụkwọ a. Biko, gbalịa ka ị bịa.
Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Mach 2016
mailto:?body=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Mach 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016081%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Mach 2016